Himalaya Dainik » नेपालसँग सम्बन्ध भएका चर्चित ४ भारतीय कलाकार !
नेपालसँग सम्बन्ध भएका चर्चित ४ भारतीय कलाकार !
नेपाल र भारतको सम्बन्ध रोटिबेटीको छ भन्ने गरिन्छ केहि नेपालि हरु भारतीय संग बिहे गरेर उतै बसेका छन् केहि भारतीय हरु नेपाल बिहे गरेर आएका छन ।
केहि भारतीय बलियुड कलाकार हरु जसको नेपालसंग पारस्परिक सम्बन्ध रहेको छ । नेपालीहरुको बलिउडप्रतिको सम्बन्ध माला सिन्हा बलिउडमा कुनै समयकी चर्चित रहेकी नायिका माला सिन्हा नेपाली हुन । उनको बुबा नेपाली क्रिश्चियन हुन् । माईती घर नामक चलचित्रमा काम गरेर बलिउडमा नै आफनो करियर बनाएकी माला सिन्हाले नेपालकी छोरी बनेर बलिउडमा नाम र दाम दुबै कमाईन् ।
टेलिभिजनकी चर्चित अनुहार श्रृति झा लाई धेरैले नेपाली हो भनेर भन्ने गरेका छन् । तर उनी नेपाली भने होईनन् । उनी आफनो परिवारको साथमा लामोसमय काठमाडौँ बसेकी थिईन् । बिहारमा जन्मिएकी श्रृतिले काठमाडौँमा मोर्डन इण्डियन स्कुलमा आफनो अध्ययन पुरा गरेकी हुन् । आफनो बाल्यकालनै नेपालमा बिताएको कारण उनी राम्रोसँग नेपाली बोल्न सक्छिन् । उनले सिरियल कुमकुम भाग्य बाट बिषेश चर्चा कमाएकी हुन् ।
प्रकाशित मिति २० जेष्ठ २०७७, मंगलवार १९:१२